Shina : Kendrena atao ankivy ny Carrefour · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2008 4:49 GMT
Carrefour, ilay mpaninjara goavana frantsay indray no vao tafiditra ho ao anatin’ny lisitra maintin’ny mpiserasera tia tanindrazana any Shina. Niakatra avo dia avo ny fandefasan-kafatra am-pinday ho amin’ny fanaovana ankivy, mihoatra ny 5000 ny toeram-piseranana an’aterineto any Shina, araka ny fanisan’ny Daqi.com azy, no feno lahatsoratra mamely ny Carrefour, ary efa misy vitsivitsy ny mpiserasera mafana fo mampihatra io tarigetra io.
Ao anatin’ny adihevitra mafana ifanazavan’ny mpankato sy ny mpanohitra any ankivy atao aminy ankehitriny ny Carrefour any Shina.
Vao haingana izay no nipariaka lasa lavitra ity hafatra manaraka ity :
Mino izahay fa afaka ny manao ankivy ny Carrefour ianareo farafaharatsiny ny voalohany volana mey ho avy izao, ahafahana mandefa hafatra amin’ny tandrefana avy amin’ny alalan’ny tsy fisian’ny mpanjifa ao mihitsy amin’io andro io hoe: Aza alaina baraka ny Shinoa ! aza ompaina ny vahoaka shinoa !
Efa mamahenika ny firenena manontolo ankehitriny ny antso hanaovana ankivy ny Carrefour, ary dia mitsinjo miloha ny fandraisanareo anjara ho amin’izany izahay ! Misaotra tompoko.
Heverina fa vokatry ny fisaritahana natao tamin’ny afo olaimpika tamin’ny fandalovany tany Frantsa sy ny tsaho miely fa nanome vola ny Dalai Lama ny mpanana petrabola iray lehibe ao amin’ny Carrefour, dia ny vondrona LVMH izany.
Manazava rahateo ny antony hanaovana izany ankivy izany ilay lahatsoratra naely :
Tsy tontosa antsakany sy andavany araka ny fahalalan’ny ankamaroan’ny Shinoa azy ny fandalovan’ny afo olaimpika tany Parisy. Jereo ny nataon’ny Frantsay sy ny governemantany rehefa ny Shinoa no nitondra ny afo olaimpika, izay endrika hita mason’ny fandriampahalemana sy ny firahalahiana tany aminy :
1. Talohan’ny fandalovana dia nisy fahitalavitra frantsay iray niantso fanoherana an-dalambe ary ny antony dia hoe “tsy mila ny fihofahofan’ny saina Shinoa mihofahofa hatraiz hatraiza” ry zareo.
2. In’efatra no voatery novonoina ny afo noho ny fanelingelenana nataon’ny mpiendaka Tibetana.
3. Nijoro fotsiny ny polisy frantsay nijery ny fanendahana ny afo nataon’ny mpiendaka sy nandritra ny setrasetra nahazo ilay mpitondra afo izay sembana.
4. Nandritra ny fandalovan’ny afo, dia nanofahofa ny sainan’ny mpiendaka sady niantsoantso hoe « Afaho i Tibet » sy ny hoe « mbà menatra ry Shina » ny andiana Frantsay maro hanoherana an’i Shina.
5. Nisy aza andiana tanora nanendaka ny sainan’ny Kintana dimy nentin’ny mpianatra Shinoa, ary nandrovitra azy, nifanandriinany andaniny sy ny ankilany.
6. Rehefa nandalo ny Lapan’ny tanànan’ny Parisy ny afo masina, dia nivelatra ny saina sy ny sora-baventin’ny mpankasitraka ny fahaleovantenan’ny Tibet, ary nametraka marika an-tratra ho amin’ny fankasitrahana ny fahaleovantenan’i Tibet ny olo-mana-kaja rehetra, fihetsika izay nahatonga ny fanafoanana ny lanonana saika hotanterahina.
7. Ny lohateny nataon’ny gazety malaza any Frantsa tamin’ny fandalovan’ny afo tany dia hoe – Nandamoka tanteraka ny tao Paris (Figaro) sy ny hoe felaka ho an’i Shina.
Ary tsy ankavitsiana no ahitana fanehoan-kevitra hentitra sahala amin’ity eto ambany ity manohy ny fanangonan-tsonia :
Ataovy ankivy tanteraka i Carrefour.
Tapaho ny hevitra hanao ankivy
Ho fanampin’izany dia mijoro manerana an’i Shina ny vondron-tserasera QQ hanangona mpitolona ho amin’ny fanaovana ankivy. Misy lisitra maneho fa mihoatra ny 20 ny isan’ny faritra niditra tamin’izany fanentanana amin’ny aterineto izany ka tafiditra ao i Chongqing, i Shanghai ary i Shenzhen, ary mandritra ny fanentanana dia afa-mampiasa ny fitaovana IM (fandefasana hafatra eo noho eo) ny mpiserasera ahafahana mandrindra ny fihetsiketsehana.
Ary hita any Kunming, tanàna atsimon’i Shina, fa efa voarain’ny mpiserasera ny hafatra ka nihetsiketsika teo anoloan’ny Carrefour tany an-toerana ry zareo. Azo vakiana ny sora-baventy eto (jereo ny lahatsoratra nadika) hoe :
Tohano ny lalao olaimpika, tohero ny fahaleovantenan’ i Tibet ; Ataovy ankivy ny vokatra Frantsay sy i Carrefour !
Ny sary manaraka dia nalaina tao an-tanànan’i Wuhan. Mariho fa mitovy tanteraka ny sora-baventy.
Any Beijing, sipa iray manangana ny marika nataony hanehoany ny fahatezerany noho ny setrasetra nahazo an’i Jin Jing ilay atleta sembana nitondra ny afo olaimpika tany Frantsa.
Hoy ny mpiserasera iray:
Derao ny ataony!
Tsy Shinoa aho raha tsy maneho hevitra amin’ity lahatsoratra ity
Fiandrandran’ny Shinoa indrý rasipa!
Felaka tehamaina ho an’ireo vahoaka tsy matahotody.
May koa izay tsy mankasitraka ny ankivy
Tamin’ity indray mitoraka ity kosa dia tsy mena-mitaha tsy tahaka izay nitranga tamin’ny fanoherana ny ankivy natao tamin’ny vokatra Japoney ireo manohitra ny ankivy fa mahatratra ny faratampony ihany koa. Na dia ao amin’ny Tianya.com, ilay tranonkala malaza ho fitabatabana sy ny fitiavantanindrazana aza dia tsy mitsoaka ny mpanohitra ny ankivy.
Ao amin’ny Tianya no nitenenan’i Lepel ao amin’ny lahatsorany fa “tsy manam-pahendrena ianareo raha manaoankivy ny Carrefour na mihevitra antsika ho tsy manam-pahendrena ihany koa”,
看到很多人在发起和组织抵制法国零售业巨头家乐福的活动，感觉实在可笑，同时也深为国人的愚昧而痛心。就象之前的抵制日 货、抵制美货，或更久远的抵制洋货 运动一样愚昧。难道，非要把中国孤立于这个世界才好？难道，非要再搞一次“闭关锁国”才罢？想象当初的反日活动，作为一个老百姓，我们得到了什么好处？而 政府在双方关系缓和后，却又开始“镇压”有些失控的反日活动。……..这 样的教训还不够，现在又要反法，好了，你抵制了一个家乐福，便宜的只是其他超市，老百姓得到的只是要多跑一些路、多花一些钱去买日用品，还会得到什么？等 有朝一日，法国换了总统或对华政策，到时候又回到“中法友谊万古长存”的路子上来是早晚的事，到了那时候在看看今天大家的举动难道不觉得可笑吗？
Mahatsiaro ho menatra aho mandre fa maro no miomana hanao ankivy ny Carrefour. Malahelo dia malahelo amin’ny fahajambany aho, tahaka ny fahadalàna natao tamin’ny fanaovana ankivy ny vokatra Japoney, Amerikana ary tandrefana ihany taona maro lasa izay. Tianareo hitoka-monina indray ve i Shina ? Inona moa no mba tombontsoa azontsika olon-tsotra tamin’ny nanaovana ankivy ny vokatra Japoney ? Nofaizina mafy izay rehetra nanao tafahoatra rehefa tsy nifanenjana intsony ny governemanta roa tonta… ary dia mbola tsy nandray lesona avy amin’izany ihany isika fa dia avy indray hanosika ny Frantsay.
Eny ary koa, manome vahana ny tranombarotra lehibe hafa fotsiny ianareo amin’ity ankivy ity ary maniraka ny olona handeha lavitra kokoa sy handany vola kokoa amin’ny fiantsenana. Dia hoana koa ny manaraka ?
Indray andro any, na ho ela na ho haingana, rehefa misy filoham-pirenena frantsay vaovao indray ary miova ny politikany, dia ho avy indray ny hoe “ Ho ela velona anie ny fifankatiavana Shinoa sy Frantsay ”. Amin’izay fotoana izay moa tsy hihomehy isika rehefa mahatsiaro ny zavatra ataontsika amin’izao fotoana izao?
Mametrapetraka i 在爽与不爽中徘徊 fa raha misy izay hiharan’ny voka-dratsin’ny ankivy raha hampiharina tokoa io dia ny Shinoa ihany.
Ankivy amin’ny Carrefour? Ô ry zareo a! ny vokatra Shinoa, ny mpiasa Shinoa ary ny firenentsika ihany anie izany no tena ataonareo ankivy e ! mandoa hetra amin’ny fitondrantsika anie i Carrefour e ! F’angaha ny Ben’ny tanànan’i Paris no ho tratran’ny ankivinareo ? Tsy alehany mihitsy.
Maneso koa i Rivo-boanion’i Hainan（海南椰风）:
Nahoana aho no hanao ankivy? Mbola tsy niantso antsika hanao izany ny Fiankohonam-panjakantsika (manondro ireo mpitondra tenin’ny antoko izany), ary angamba afaka fotoana fohy dia hifampiarahaba amin’ny fifankatiavan’i Shina sy i Frantsa.
Mafy mandrakariva nyady nataontsika tamin’i Vietnam teo amin’ny tantara, ankehitriny anefa manao ahoana? Miresaka ampirahalahiana sy ampifankatiavana ny vahoaka roa tonta! Iza moa no mba mieritreritra ireo miaramila maty any ?
Mahatsiaro indray ny tany amin’ny folo taona lasa i 柳州刺史:
Folo taona lasa izay raha nodarohan’ny miaramila Amerikana baomba ny ambasady Shinoa dia tena vinitra kokoa noho ireo “Tanora Tia Tanindrazana ” ankehitriny ireo aho. Te-hamelaka tehamaina ny tenako aho rehef amahatsiaro izany fotoana izany.
Miahiahy i 东边日出西边女 :
Efa dia nisahirana mihitsy isika, na ireo mpitondra antsika, vao nahatafiditra an’i Carrefour eto an-tanànantsika. Inona no tokony hataoko ?Ankivy ? Misarabazana amin’ny tanàna sy ny firenena aho izany.
Mimenomenona i 城南笑笑 :
tsy tia Japana tsy tia Frantsa tsy tia Alemana tsy tia Korea tsy tia Taiwan tsy tia Italia tsy tia Aostralia tsy tia Vietnam tsy tia Britanka tsy tia Amerikana … tsy tia ny tany manontolo … tsy tia ny firenen-drehetra.
Fa tsy misy ny fanoherana ny fitokana-monina sy ny kolikoly. Olona mahonena…
Ary dia mamehy azy i Adaste:
Misy miteny hoe “mandavaka ny governemanta, ary mamboly hazo ny tanora mafana fo ”.
Eto ampamaranana dia mety haneho ny fanoharana fa maro ny Shinoa mihevitra io fomba fijery (manao ankivy io) ho mari-pitiavantanindrazana.
Manoratra i Magicsilence :
Ny Tanora Tia Tanindrazana no fimailon’ny antoko – ariana rehefa vita izay nilana azy.
Misara-kevitra tokoa ny roa tonta. Efa heno moa ny takoritsika fa hanao fihenam-bidy goavana ny tranombarotra Carrefour amin’ny voalohan’ny volana mey ho valin’ny fikasana hanaovana ankivy. Ary milaza moa ry zareo fa ho sakaizan’ny Shinoa mandrakariva izy. Nefa na tsy izany aza dia mampisalasala ihany ny mety hahombiazan’ny ankivy, satria na dia nanohana ny fanaovana ankivy ny vokatra Japoney aza ny maro an’isa taona maro lasa izay dia tsy hita akory izay vokany, nefa mitovitovy ny herin’ny andaniny sy ny ankilany amin’izao fotoana izao.